Ahitana karazany telo ny bileta tokana ho ampiasaina amin’ny fifidianana solombavambahoaka hoy ny Ceni. Na atao A 3 na A4 na A5 ny bileta tokana izay ho atonta manomboka amin’ny 26 marsa izao.
Efatra no naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho teny amin’ny lalam-pirenena faha-efatra. 44 km hiditra an’ i Mahajanga ny marainan’ny omaly talata 19 martsa tokony tamin’ny 6ora maraina. Fiarakodia fitateram-bahoaka mampitohy an’Antananarivo sy Mahajanga ity tra-doza ity. Marihina fa tsy nisy aina nafoy.
FAKANA AN-KERINY KANDIDA
Taorian’ny kidnapping izay kandidà ho solombavam-bahoaka izay handeha hametraka dosie no lasibatra dia fantatra koa omaly fa nisy olona nosamborina rehefa voarohirohy ho mpiray tsikombakomba tamin’izany.
Eo am-pitadiavana fatratra ireo naman’ilay olon-dratsy izay mpanapaka filahiana ny mpitandro filaminana, raha ny fampitam-baovaon’ny polisim-pirenena.
Raim-pianakaviana 52 taona no hita faty, ny talata 29 janoary teo, tamin’ny 7 ora maraina, tao anatin’ny tanimbary manamorona ny Tetezan’Andranovao, Ambohimangakely.
Ny alahady 27 janoary izy no nilaza tamin’ny zanany fa andeha handro tao amin’ny reniranon’Ampasimbe, kanefa mamo. Rehefa avy nozahan’ny mpitsabo sy ny zandary teny an-toerana ny razana dia nomena ny fianakaviany izay monina ao Ambohitrombihavana, Ambohimangakely.
May ny tsena tao amin’ny fokontany sy kaominina ary distrika Amboasary Atsimo, omaly alarobia 30 janoary. Tsy mbola voafaritra ny entana kila forehitra. Tsy nisy ny naratra sy ny aina nafoy. Nanampy ireo mpivarotra namonjy ny entana sisa tsy may sy niaro tamin’ny halatra ireo zandary teo an-toerana. Tsy mbola fantatra hatreto ny fiavian’ny afo.
Jiolahy mitam-piadiana roa tamin’ireo fito nikotrika fanafihana mpandraharaha teratany Sinoa iray tany Kianjavato, Mananjary, ny alatsinainy 28 janoary, tamin’ny 6 ora hariva no azon’ny zandarimariam-pirenena sambo-belona tany an-toerana. Notanana ao amin’ny Borigadin’ny zandary ao Antsenavolo izy ireo, mbola mitohy ny fanadihadiana.
FAKANA AN-KERINY TSARATANANA
Tsy tanteraka ny fakana takalon’aina nokotrehin’ireo olon-dratsy saika notanterahina tamin’ny vehivavy 28 taona, mbola tao amin’ny Distrikan’i Tsaratanana hatrany, fokontany Andranomaly, kaominina ambanivohitra Betrandraka, ny alahady 27 janoary farany teo, tamin’ny 10 ora alina. Noho ny fisafoana tampoka notanterahin’ny zandary tany an-toerana no nahavonjy ilay renim-pianakaviana. Fitaovam-piadiana “AKM” iray ombana bala efatra anaty fonony no tra-tehaka tamin’ireo malaso. Tsy nisy naratra ny mpitandro ny filaminana sy ny mponina fa iray tamin’ireo jiolahy no voatifitra.